बुद्ध एयरको विमान ल्यान्ड हुन नसक्दा एक यात्रु बेहोस, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
बुद्ध एयरको विमान ल्यान्ड हुन नसक्दा एक यात्रु बेहोस, के छ अवस्था ?
काठमाडौं। काठमाडौंबाट ६९ यात्रु लिएर नेपालगञ्जका लागि उडेको बुद्ध एयरको कल साइन नं 9N_AJX को जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा झन्डै पौने घन्टापछि मात्र अवतरण भएको छ।
बेहोस अवस्था भेटिएकी यात्रुको समाचार तयार पार्दासम्म होस आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिए ।
बिहान ८ बजेर ४० मिनेटमा अवतरण हुनुपर्ने विमान ल्यान्ड हुन नसकेपछि होल्डमा राखिएको सुरक्षा निकट स्रोतले जनाएको छ। यस्तो नेपालि बिमान उड्ने बाटो आकासे रुट।